ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သွေးဆာနေသူများသို့...”
အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီတော့မရနိုင်ဘူး နာမည်ကောင်းပဲရမယ်
Ko Paw.....again I am fully in agreement with you. Those government employees are being victimized the most by the system. No doubt!
ကိုပေါရဲ့အညွှန်းအတွက် comment ပေးလိုက်ပါတယ်၊၊ အဲဒီ့ အညွှန်းကို
အရင်ကမဖတ်ခဲ့ရပေမဲ့ အခု မှဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ကျွန်မ အမြင်ကတော့ သာရာကို လိုက်တတ်တဲ့ လူတန်းစား တွေ ကျွန်မ တို့ မြေပေါ်မှာ ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး၊ အာဏာရှင်ရဲ့ လက်အောက်က ဘယ်တော့မှ မလွတ် မြောက်နိုင်ပါဘူးရှင်၊၊ အဲ့ဒီ့လို သာရာလိုက်တတ် တဲ့ လူတန်းစားတွေ၊ မလုပ်သင့်၊မလုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်တဲ့လူတွေ၊ အဲ့ဒီ့လို လူအမျိုးအစားကိုလူလို့ တောင် မခေါ် ထိုက်တော့ပါဘူး၊၊ လူဆိုတာ အနည်းငယ်တော့ တရိစ်ဆာန် ထက် သာသင့်တာပေါ့ရှင်၊၊ အဲ့ဒီ့လို လူတွေဟာ ဖေါက်ပြန် တဲ့လူတန်းစားတွေလို့ ကျွန်မ ကတော့သတ်မှတ်တယ်၊၊ သူတို့ ဟာ အာဏာ ရှင် ပေါက်စလေးတွေဘဲ၊၊ လောကမှာ အာဏာကိုမလွန် ဆန်ရဲရင်တောင် အမျိုးမျိုးသော နည်းတွေနဲ့ ဆန့် ကျင်လို့ ရပါတယ်ရှင်၊၊ ကံကောင်းတာ တစ်ခု က ကျွန်မဟာ သာပေါင်းညာစား လူမဟုတ်တဲ့ အတွက် အမြဲ ဂုဏ်ယူမိတယ်၊၊ အဲ့ဒီ့လို အာဏာရှင်အလိုကျ အာဏာရှင်ရဲ့ ဒေါက်တိုင်ဘ၀ကို ဘယ်လို နည်းကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်နေတဲ့ သူတိုင်းကို စဉ်းစားလို့ ကိုမရပါဘူး၊၊ အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ အတိုင်း အာဏာအပြည့်နဲ့ အခွင့်အရေးပေးနိုင်တယ်၊၊ အဲ့ဒီ့ဖေါက်ပြန်တဲ့ သာပေါင်းညာစား လူတန်းစားတွေက အာဏာရှင်ပေးတဲ့ အခွင့်အရေးကို စွန့် ပြီး ၊ ဒီဘက်က ထောင်ကျ၊ နှိပ်စက်ခံနေကြရတဲ့သူတွေဘက်ကို ကူးပြောင်းဖို့ ဆိုတာ ကိုပေါရေ... စိတ်ကူးလေးအတိုင်း ဆိုရင်တော့ တော်တော်ရင်လို့ ကောင်း တဲ့စိတ်ကူး ပါဘဲ၊၊ ကိုပေါရေ.. လောကကြီးမှာ ဓမ်မနဲ့ အဓမ်မ နှစ်မျိုးဘဲရှိတယ်၊၊ အဓမ်မ ဘက်တော်သားဟာ ဘယ်လို နည်းနဲ့ မှ ဓမ်မ ဘက်ကို လက်ရှိဘ၀ထက် ပိုပြီး ရင်းရတဲ့ အခြေအနေဘက်ကို တော့ပါလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊၊ ကျွန်မလဲ အဲ့ဒီ့လို အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ပါဘဲ၊၊ ချမ်းသာတဲ့သူမှမဟုတ်တာ၊၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို နည်းနဲ့ မှ လက်မခံခဲ့ဘူး၊၊ သူတို့ ကို နားလည်ပေးဆိုရင် စစ်အဏာရှင် တစ်သိုက်ကိုပါနားလည်ပေးလိုက် တော့မယ် ကိုပေါရေ... စက်တင်ဘာ အရေးအခင်း ကတည်းက သံဃာရိုက်ရဲ/သတ်ရဲ တဲ့သူတွေကို ဘယ်လို လူမျိုးတွေပါလိမ့်ဆိုပြီး စဉ်းစားလို့ ကိုမရဘူး၊၊ နားလည်ပေးဖို့ တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး မပြောပါနဲ့ ရှင်၊၊ အဲ့ဒီ့လို အာဏာရှင် ကသတ်ဆိုသတ်၊ ရိုက်ဆိုရိုက်ဆိုတဲ့ လူတွေကြောင့် အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်နေတာပါ၊၊
မရည်ရွယ်ဘဲ စာရှည်သွားတာရယ်၊ စာလုံးပေါင်းအခက်အခဲရယ်အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊၊
Myanmar ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး..
ခင်ဗျားရဲ့အမြင်တွေ ကျဉ်းမြောင်းလွန်းနေတယ်ဗျာ..ကိုယ့်မိသားစု အခြေအနေကို ငဲ့ပြီး ကိုယ့်ဆန္ဒကိုငဲ့ပြီး ၀န်ထမ်းလုပ်နေရတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် ခင်ဗျား ပြောပုံက မြန်မာပြည်မှာ ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ(ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေ) ကို စော်ကားလိုက်တာပါပဲ ကိုပေါရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာလဲ ရေးထားပြီးသားပါ နေရာတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့သူရှိသလို မကောင်းတဲ့သူလဲ ရှိတာပါပဲ ခင်ဗျားပြောတာက လွန်လွန်းတယ် ဝန်ထမ်းဖြစ်လာသူတွေမှာလဲ စိတ်ကောင်းစေတနာရှိသူတွေ ရှိပါသေးတယ် အားလုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းပြီးမရိုက်လိုက်ပါနဲ့ ..သံဃာသတ်တဲ့သူတွေက သူ့အကုသိုလ်နဲ့ သူအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်..အားလုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းပြီး မရမ်းဖို့ပဲ ပြောချင်တာပါ ။..ဒါပါပဲဗျာ။
MG >>> မMyanmar ပြောတဲ့ သာကူးတတ်သူတွေဆိုတာ သာမန် ၀န်ထမ်းတွေကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းနီးပါး စနစ်ရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဖြစ်ပုံခြင်း၊ အဖြစ်ခံပုံခြင်း မတူညီတာကိုတော့ ခွဲခွဲခြားခြား နားလည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဥပမာ အစစ အရာရာ ဆုတ်ယုတ်ရင်း ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးအတွက် အဆုံးစွန် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံပြီး ဆောင်ရွက်သူတွေကို သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝနဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံ ခွေးအကိုက်သလို ၀ိုင်းကိုက်နေတဲ့ အချို့သော စွမ်းအားရှင်တို့၊ ကြံ့ဖွတ်တို့လိုသူတွေ၊ အချို့သော မတရားသူကြီးတွေ အစ အစရှိသူတွေကို ရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာ အသိသာကြီးပါ။
စားဝတ်နေရေးသက်သက်ဆိုရင် လက်ကြောတင်းအောင် လုပ်စားကြပါလား။ မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲခေါင်းပါးတဲ့ လူဦးရေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုးပွားနေတာပဲ။ အဲ့ဒီလူတွေအားလုံး ဘာလို့ စွမ်းအားရှင်တို့၊ ကြံ့ဖွံ့တို့ မလုပ်ကြသလဲ။
ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ မိမိကိုယ်ကို လူလို့ တန်ဖိုးထားနေကြလို့ပဲ။
အပေါ်ပိုင်းက မိစ္ဆာအာဏာရှုးတွေကို တတိုင်းပြည်လုံးက အော့နှလုံးနာ စက်ဆုပ်ရွံရှာနေကြချိန်မှာ ၀မ်းစာကြောင့် မိုးခါးရေသောက်ရတယ်ဆိုတာ လူကြားလို့ မကောင်းတဲ့ ကိစ္စပါ။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ဒုက္ခတွင်းထဲရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ယုတ်မာ ရက်စက်စွာ နှောင့်ယှက်နေသူမှန်သမျှ အာဏာရှုး အကြီး၊ အလတ်၊ အသေး၊ ပိစိမွှားမှန်သမျှ လူမဟုတ်သော၊ တိရိစ္ဆာန်ထက် နိမ့်ကျသော သတ္တ၀ါတွေချည်းပဲ။
မည်သို့သော စာနာ နားလည်မှုမျိုးနဲ့ မထိုက်တန်သောသူများသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဲမြန်မာပြည်မှာ မMyanmar တို့လို စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာသူများ၊ မိုးခါးရေ စိတ်တိုင်းကျ မသောက်သုံးများ များသထက် များလာဖို့ အထူး လိုအပ်နေပါတယ်။
Myanmar and Lun Lunn.....ခင်ဗျား။
Freedom house က ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသန စာရင်းဇယားများအရ (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာ) အကြမ်းမဖက်တဲ့ Civil Disobedience နည်းနဲ့ လွတ်လပ်လာတဲ့ နိုင်ငံအရေအတွက်ဟာ အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းသုံးပြီး လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံအရေအတွက်ထက် အများကြီးသာလွန်ပြီး၊ ရရှိလာတဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာလည်း ပိုမိုခိုင်မာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀ လုံးလုံးမှာ အတိုက်အခံဖက်က မြန်မာပြည်မှာ လူထုကို အောက်ခြေအထိ ဆင်းပြီး စည်းရုံးတာကို ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကတကြိမ်၊ နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ လွတ်လာတုန်းမှာ လုပ်ခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်မှုကို လုပ်မကြည့်ဘူးသေးပဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနေမယ်ဆိုရင် တယူသန်ရာ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အစိုးရခိုင်းတိုင်းလုပ်သူတွေရဲ့ မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချသင့်တာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အဲဒီလူတွေကို သတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတာကတော့ မှန်ကန်တဲ့၊ တရားမျှတတဲ့ လုပ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သူတပါးအသက်တချောင်းကို သတ်တာဟာ အာဏာရှင်အငယ်စားလုပ်ရပ်လို့တောင် ပြောလို့ မရပါဘူး။ အာဏာရှင်အကြီးစားရဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ အတိုက်အခံနာမည်ခံပြီးလုပ်ရင်လည်း အဲဒီလူတွေဟာ လုပ်ရပ်အားဖြင့် အာဏာရှင်နဲ့ ဘာမှမကွာခြားပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီနည်းသုံးလို့ ဒီမိုကရေစီမရနိုင်ပါဘူး။
ကျနော်တို့ အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်တယ်ဆိုတာဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ တရားဥပဒေအတိုင်း တရားမျှတစွာဖြစ်ဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်တွေပါပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ရုံး ဗုံးခွဲတာတို့၊ လွိုက်ကော်ရဲစခန်းဗုံးခွဲတာတို့၊ သင်္ကြန်တွင်း ဗုံးခွဲတာတို့ဟာ မဆိုင်တဲ့လူတွေကို ထိရုံမျှမက ဝန်ထမ်းတွေကို ထိရင်လည်း အဲဒီဝန်ထမ်းတွေဟာ သေဒဏ်နဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ဘယ်သူက ဆုံးဖြတ်တာလဲ။ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ အညီဆုံးဖြတ်တာလဲ။ ဘယ်ပြည်သူက အပ်နှင်းထားတဲ့ အာဏာနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာလဲ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဆုံးဖြတ်ပြီး သတ်တာဆိုရင် ဒါဟာ သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်မှု ကျူးလွန်တာဘဲ။ ဒီလုပ်ရပ်နဲ့ နအဖရဲ့ လူသတ်တဲ့လုပ်ရပ် ဘယ်လို ကွာခြားသလဲ ရှင်းပြပါ။ နအဖက တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးအကြောင်းပြတယ်။ အတိုက်အခံက ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အကြောင်းပြတယ်။ လုပ်ရပ်ကတော့အတူတူပဲ။ အခု ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ နအဖရဲ့ စနက်တွေဆိုရင်လည်း ဒီလုပ်ရပ်မျိုးတွေကို အတိအလင်း ရှုတ်ချနိုင်ရပါမယ်။ ကိုယ်လုပ်တာဆိုရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စအပေါ် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဖွင့်ဟပြီး တာဝန်ယူရဲကြသင့်ပါတယ်။ တာဝန်မယူရဲပေမယ့် လုပ်ရပ်တွေကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ထောက်ခံနေတယ်ဆိုရင်လည်း ဗုံးဖောက်သူတွေနဲ့ တကျိတ်တည်း တဉာဏ်တည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းတွေအရ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာက ရာဇဝတ်မှုကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျူးလွန်ထားသူတွေကို တိုင်းပြည်လွတ်လပ်သွားတဲ့အခါ တရားဥပဒေကြောင်းအရသာ ပြည်သူတွေရဲ့ တရားရုံးတော်မှာ တရားစွဲဆို စီရင်ချင်ချရပါမယ်။ သူတို့မှာလည်း တရားဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိရပါမယ်။ သူတို့ဟာလည်း လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားသူများနည်းတူ လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ ရစေရမယ်။ တရားခွင်မှာ တန်းတူညီမျှ တရားမျှတမှုကို ခံစားစေရမယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အခု စစ်အစိုးရပြုတ်ကျသွားရင်တောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရဘဲ တရားစီရင်ခံရမယ်။ သူ့မှာလည်း နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအတိုင်း ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံကာကွယ်ခွင့်ရှိရမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းကို တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးမပေးဘူး။ အမြင်မတူသူတွေကိုကျတော့ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးကို မပေးဘူးဆိုရင် အဲဒီစနစ်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့၊ တရားမျှတတဲ့စနစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ စနစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ နအဖ နေရာမှာ တခြားလူတွေ လူစားပြောင်းသွားတာ တခုပဲ ရှိတယ်။ စနစ်က မပြောင်းဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစနစ်မျိုးမှာ တိုင်းပြည်ဟာ ဘယ်တော့မှ မအေးချမ်း၊ မလွတ်လပ်ပါဘူး။ အခု နအဖ လက်အောက်မှာလိုဘဲ ပြည်သူတွေ ကျီးလန့်စာစားနေရဦးမှာပါဘဲ။
ကျွန်တော်ပြောတာက ရှင်းရှင်းလေးပါ အားလုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းပြီးမရိုက်ဖို့ ပြောတာပါ..ခင်ဗျားတို့က စစ်အစိုးရကို မုန်းသလို ကျွန်တော်လဲ မုန်းပါတယ်...ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးမိမိကိုယ်ကို လူလို့တန်ဖိုးထားနေကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ယနေ့လိုဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ဒီအတွက်ကြောင့် ဝမ်းစာရေးအတွက် လုပ်နေကြရတဲ့ သူတွေကိုလဲ လုံးဝကြီး အပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့ ဦး..ဥပမာ ကျွန်တော်သိရသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ နေ့စားတွေပါ သူတို့က တရက်ကို နေ့တွက်နဲ့ရပါတယ် ခေါ်တဲ့နေရာကို လိုက်ပြီး အင်အားပြပေးမယ်ဆိုရင် တနေ့ကို ၃၀၀၀ကျပ် အနဲဆုံးရကြပါတယ်..သူတို့မှာ ဘာနိုင်ငံရေးစိတ်ဓတ်မှ မရှိကြပါဘူး ပိုက်ဆံရဖို့က အဓိက ဖြစ်နေကြတာပါ အတိုက်အခံတွေက နေ့စားနဲ့ ပိုက်ဆံပေးခိုင်းကြည့်ပါလား သူတို့ဟာ အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေ ဖြစ်လာကြမှာပါ သာရာလိုက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး(စွမ်းအားရှင်တွေကိုပြောတာ)
NEW YORKMay 24, 2005
•Freedom and democracy are best advanced by powerful, broad-based, and cohesive civic coalitions employing non-violent tactics; in 32 transitions in which strong non-violent civic coalitions were active, 24 countries (75%) are Free, 8 (25%) are Partly Free, and none are Not Free today.
•The largest gains for freedom occur asaresult of transitions driven primarily or in large measure by significant civic protest and mobilization. Of 50 such transitions, 32 have led to high levels of respect for political rights and civil liberties. By contrast, in the 14 transitions from authoritarian rule in which the driving force was from the "top down" and led primarily by reform-minded power holders, only3(21%) are Free, with strong performance in terms of fundamental rights. Three other transitions were sparked by international military intervention.
•When cohesive and strong civic coalitions emerge in an environment where there is little or no violence, the result almost uniformly isahigh level of freedom. Pre-transition,9such countries were Partly Free and9were Not Free. Today, post-transition, 17 are Free, and only 1 is Partly Free.
•Even in settings of significant or high violence, the prospects for freedom are significantly better when the opposition refrains from using violence. In the 20 countries in which both the government and segments of the opposition used violence, only 20 percent of the countries are Free today, while 60 percent are Partly Free, and 20 are Not Free. By contrast, in the 12 countries where the authorities employed violent force but the opposition resisted with nonviolent tactics,7(nearly 60 percent) are Free, while5(more than 40 percent) are Partly Free.
•After the collapse of authoritarian rule, many transitions fail to result in consolidated democracy. It is therefore vital that the international community invest in the emergence of broad-based, non-violent civic coalitions in closed and/or transitional societies.
•Governments, regional bodies, and global institutions should exert diplomatic and other pressures on states to curb repression and create political space for civil society activity.
•Democratic governments and outside donors should pressure states to ensure free, fair, and transparent electoral processes and offer timely support when civic forces peacefully rally in opposition to sham elections, as recently witnessed in Ukraine and Georgia.
•Despite the abiding importance of civic coalitions and civic nonviolent resistance in recent transitions from dictatorship, onlyasmall proportion of international aid assists nonviolent civic movements and groups; such support should be increased and support grants should focus on sustaining the infrastructure of emerging civic groups and civic coalitions, especially in their early stages of formation.
•Training in strategies of nonviolent civic resistance should be an important component of technical assistance efforts.
I respect you for this post and your comment.
ကျွန်တော်က ရေးသားခဲ့တာကို သေသေချာချာ ဖတ်ရင်
"လူတိုင်းနီးပါး စနစ်ရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဖြစ်ပုံခြင်း၊ အဖြစ်ခံပုံခြင်း မတူညီခြင်း" ...
"သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝနဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံ ခွေးအကိုက်သလို ၀ိုင်းကိုက်နေတဲ့ အချို့သော စွမ်းအားရှင်တို့၊ ကြံ့ဖွတ်တို့လိုသူတွေ၊ အချို့သော မတရားသူကြီးတွေ အစ အစရှိသူတွေ" (မိုးခါးရေကို လိုတာထက် ပိုပြီး စိတ်တိုင်းကျ သောက်သုံးသူတွေ) ...
ကိုသာ ဆိုလိုတာ နားလည်နိုင်မှာပါ။
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရအရ ကိုပေါပြောတာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းရာမှာ အစစ အရာရာ စွန့်လွှတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားရဲ့ ဘ၀တွေ၊ အသက်တွေ ဆုံးရှုံးမှုနည်းသထက်နည်းအောင်၊ ပြည်သူလူထု အမြန်ဆုံး ဒုက္ခငရဲတွင်းက လွတ်အောင်၊ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်က အမြန်ဆုံး လွတ်အောင် မည်သို့သော နည်းဖြင့် တော်လှန် တော်လှန် (ပြည်သူလူထု မထိခိုက်ရင် ပြီးရော)၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်တော့မှ ရှုတ်ချမည် မဟုတ်ပါ။
အဲဒီလူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီအရ နည်းလမ်းကျချင်မှ ကျမယ်၊ ဥပဒေအရ လွှဲချော်ရင် လွှဲချော်မယ်။ ကျိန်းသေတာက "နအဖ ရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့တော့ ရည်ရွယ်ချက်ချင်း၊ အနစ်နာပုံချင်း လုံးဝ မတူညီတဲ့အတွက်" နအဖလို လူယုတ်မာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံပေးလို့ မရပါ။
သူတို့ လုပ်ရပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ရှုထောင့်၊ တရားဥပဒေရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရင် မှားနေပေမယ့် လူယုတ်မာတွေ မဟုတ်သလို၊ အာဏာရှင် အကြီးစား၊ အလတ်စား၊ အငယ်စားတွေလည်း မဟုတ်တာကတော့ အင်မတန်မှ ထင်ရှားပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အဲ့ဒီလိုသူတွေဟာ အားလုံးအတွက် ပေးဆပ်ခြင်းတာ ပြုခဲ့ပြီး ရယူခြင်း တစ်ခုမှ မပြုခဲ့သူတွေမို့ပါပဲ။
ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်ထောက်ပြလိုတဲ့တချက်ကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာ တက်လာတဲ့ အာဏာရှင်အများအပြားဟာ တချိန်တုန်းကတော့ သူတို့လည်း ပေးဆပ်ခဲ့သူများ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ အာဏာရလာတော့မှသာ တရားလက်လွတ် ထင်ရာစိုင်းကြတဲ့အတွက် အာဏာရှင်တွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။
ကျနော့်အမြင်အရကတော့ စိတ်စေတနာကောင်းရုံသက်သက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ လုပ်ရပ်ကလည်း မှန်ကန်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ကြားဖူးနေကျ ဥပမာလေးတခုဖြစ်တဲ့ “ဖခင်ရဲ့ နဖူးမှာ နားတဲ့ ခြင်ကို တူနဲ့ထုပြီး သတ်တဲ့ သားရဲ့လုပ်ရပ်” လို ကိုယ်ကျိုးနည်းနိုင်လို့ပါ။ အခုလည်း ပေးဆပ်နေကြသူတွေအနေနဲ့ လုပ်ရပ်မှန်ကန်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီလူတွေ အာဏာရလာတဲ့တချိန်မှာ အထက်က အာဏာရှင်တွေ နည်းတူ အကျင့်ပျက်လာခဲ့ရင် လက်ယဉ်နေတဲ့သူတွေပီပီ အမြင်မတူသူတွေကို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ဖို့ကို သူတို့ လက်ရွံ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အခု အာဏာမရှိခင်မှာတောင် လက်မရွံ့သမားဘဝကို ခံယူနေချင်နေကြတယ် မဟုတ်ပါလား။
အခုလည်း ကြည့်လေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတွေကြောင့် သာမန်ပြည်သူတွေနဲ့ သာမန် ဝန်ထမ်းတွေပဲ ထိခိုက်သေကြေ ဒဏ်ရာရကြရရှာတာပါ။ အာဏာရှင်တွေကတော့ နေသာသပ လေညှာက ပါပဲ။ သူတို့မှာ လုံခြုံရေးတပ်တွေ၊ ဗုံးရှာတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ ကြောင့်ကြနေစရာ မလိုပါဘူး။ သာမန်ပြည်သူတွေမှာသာ မသွားရဲ၊ မလာရဲ အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားရတာပါ။
လွိုက်ကော်မှာ ပေါက်တဲ့ ဗုံးကို ဥပမာကြည့်ပါ။ တချို့က အသေခံဗုံးခွဲသူကို သူရဲကောင်းကြီးသဖွယ် ရေးနေတာတွေ တွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ ရဲစခန်းဆိုတာ ပစ္စည်းပျောက်လို့ တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသူ၊ လင်မယား ရန်ဖြစ်လို့ ရောက်လာကြသူ၊ ရဲထောက်ခံစာလိုချင်လို့ လာရောက်တောင်းယူသူ စသဖြင့် ပြည်သူတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့နေရာပါ။ အဲဒီလို နေရာမျိုးမှာ ဗုံးခွဲတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ တကယ်လို့ ပြည်သူတယောက်မှ မရှိတောင်မှ အဲဒီစခန်းမှာရှိတဲ့ သာမန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ သေဒဏ်ပေးခံရလောက်တဲ့ အပြစ်မျိုး ကျူးလွန်ခဲ့သူ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ရှိရင်တောင်မှ သူတို့မှာ တရားဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်ခွင့်တွေ၊ လျှောက်လဲခွင့်တွေ ရသင့်ပါသေးတယ်။
ကျနော့်အမြင်အရကတော့ အဓမ္မမှုကို ကျူးလွန်တယ်ဆိုရင် ရန်သူကျူးလွန်တာဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေကျူးလွန်တာဖြစ်စေ ဘက်မလိုက်ဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုံ့ချ ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဆန္ဒာဂတိဆိုတဲ့ အဂတိတရားကို ကိုယ်တိုင်လိုက်စားသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၊ ဦးဝင်းတင်တို့၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လို အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ရလိုက်တာ ကျနော်တို့ အင်မတန် ကံကောင်းပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကို အမြော်အမြင်ရှိစွာ ရွေးချယ်ခဲ့သူတွေပါ။ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ဟာ တချို့တွေ ဘုမသိဘမသိနဲ့ တံဆိပ်လျှောက်ကပ်သလို စိတ်ကူးယဉ်လမ်းစဉ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို လွတ်လပ်လာတဲ့ နိုင်ငံအများစုမှာ အောင်မြင်မှုအရခဲ့ဆုံး၊ လက်တွေ့အကျဆုံး လမ်းစဉ်ပါ။ ဒီလိုလက်တွေ့ကျတဲ့ လမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ခင်းတဲ့လမ်းကို ကျနော်တို့တွေကလည်း သစ္စာရှိရှိနဲ့ နောက်လိုက်ကောင်းပီသစွာ လိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မုချဖော်ဆောင်နိုင်မှာ မလွဲမသွေပါပဲ။
ကျွန်မ ဆိုလိုရင်းက လွဲချော်စွာနားလည်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊၊ ကျွန်မသည် မည်သည့်အစွန်းရောက်မှ မဟုတ်ပါ၊၊ အစွန်းရောက်သည့် မည်သည့် ဖြေရှင်းမှု့ ကို မှ လက်မခံပါ၊၊ ကျွန်မ ဆိုလိုသည်က မည်သူမဆို ရသည့်အာဏာအပေါ်တွင် အမြတ်ထုတ်ပြီး မိမိ ရရှိသည့် ရာထူး/ အခွင့်အရေး ပေါ်တွင် ရမ်းကား တတ်သည့် မတရားစွာ ပြုကျင့်တတ်သည့် လူအမျိုး အစား တိုင်း ကိုသာ ဆိုလိုသည်ဖြစ်ပါသည်၊။ ကိုပေါတင်ပြထားသည့် Nonviolent Movement ကို လက်ခံသောကြောင့် 1988 ( ကိုးတန်းကျောင်းသူဘ၀ ) နှင့် 2007 ဆန်ဒ ပြပွဲတို့ တွင် ပြည်သူ တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးတွင် ရသည့် အခွင့်အရေး ကို လက်လွတ်မခံဘဲ မိမိစိတ်ဆန်ဒဖြင့် ပါဝင် ဆင်နွဲ ခဲ့ပါသည်၊၊ ကျွန်မသည် ကောင်းမွန်စွာ အသက်မွေးလမ်းကြောင်းသော မည်သည့် ၀န်ထမ်း ကိုမှ စစ်အစိုးရဧ။် ဒေါက်တိုင် အနေဖြင့် အစွန်းရောက် စွာ မသတ်မှတ် မရည်ရွယ်ခဲ့ပါ၊၊ ကျွန်မဧ၊၊် မိဘများမှာ သာမန်ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါသည်၊၊ ရရှိထားသည့် ရထူးအပေါ်တွင် မည်သည့် အခွင့်ရေးမျှ ရယူခဲ့သူများ မဟုတ်ကြပါ၊၊ ကျွန်မဧ၊၊်မိဘများမှာ သူတစ်ပါး မျက်ရည်/မသဓာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ထမင်းမစားချင်ဘူး၊ သူများဆီက မတရားဘာမှမယူချင်ဘူး ဆိုသည့် ခံယူချက်ရှိခဲ့သလို ကျွန်မတို့ ကို လည်းထိုစိတ်ဓါတ် မျိုးကို မျိုးစေ့ချပေးခဲ့သူများဖြစ်ပါသည်၊၊ ကျွန်မတို့ သည်အမွေရသော( အာဏာသိမ်းပြီးချိန်တွင် မြေနေရာအဖျက်ခံရ၊၊ အဘွား ပိုက်ဆံဖြင့် ထိုနေရာတွင်ပြန်ဆောက်သော တိုက်ခန်း ပြန်ဝယ် ) မိဘလက်ငုတ်တိုက်ခန်း ကျဉ်းလေးတွင်သာ မိမိတို့ ငယ်စဉ်ချိန်မှစပြီး၊ ယခုအချိန်ထိ နေနေကြဆဲ ဖြစ်သည်၊၊ ကျွန်မဧ၊၊် ဖခင်မှာ တာဝန်ကျေတတ် သည့်သူ ဖြစ်သော ကြောင့် (တခြားအရာရှိများ ပိုက်ဆံပေးမှ လက်မှတ်ထိုးပေးနေချိန်တွင် ) သူ့ ဝတ်တရား ရှိသည့် အတိုင်း ကျေကျေပွန်ပွန် လုပ်ကိုင် တတ်သူဖြစ်သောကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများ သည့် အတွက် ပင်စင်ယူသည့်အခါ ကုမ်ပဏီ တစ်ခုတွင် ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရသည်၊၊ ယခု အသက် (70) ကျော်သည့်အထိ ၀မ်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ကုန်ကျ စရိတ် အတွက် ( ကျွန်မဖခင်တွင် နှလုံးရောဂါနှင့် တခြားရောဂါများရှိ )တစ်လ ( တစ်သိန်းဖြင့် ) ယခုတိုင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ရနေဆဲဖြစ်သည်၊၊ကျွန်မမှာလည်း အင်တာနက်ဖိုး အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားပြီး ချွေတာနေရသည့် အားလျှော်စွာ မိဘများကို လောက်ငအောင် ပြည့်ပြည့်၀၀ မထောက်ပံ့ နိုင်သေးပါ၊၊
ကြုံတုန်းပြောချင်ပါသေးသည်၊၊ ကျွန်မသည် သံရုံးတွင် အခွန်သွားဆောင်သည်၊၊ ၀န်ထမ်းများမှာ မဖေါ်ရွေ သည့်တိုင် ချိုသာကြပါသည်၊၊ ထိုသူများကို ၀န်ထမ်း ဟုသာမြင်သည်၊၊ ဒေါက်တိုင်ဟု မမြင်မိပါ၊၊ ထိုအချိန် တွင် ကျွန်မ တစ်ခုစဉ်းစား မိသည်၊၊ အခုအချိန်တွင် မြန်မာသံရုံးရှေ့ တွင် ဆန်ဒပြသည့် အချိန် ဖြစ်နေလျှင် ဒုက်ခဟုတွေးမိသည်၊၊ ကြောက်သောကြောင့် မဟုတ်ပါ၊၊ စဉ်းစားမိသည်မှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ လူမျိုး ပေါင်းစုံ များရှေ့ တွင် ကျွန်မသာ မြန်မာနိုင်ငံသား သံရုံးဝန်ထမ်းဆိုလျှင် အင်မတန် ရှက်မိပေလိမ့်မည်၊၊ ထိုအတွေးမျိုး ၀င်ခဲ့သည်၊၊ အုပ်ချုပ်သူ စစ်အစိုးရ ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် ဆင်းရဲသော နိုင်ငံမှ လာသည့်လူများ အဖြစ်နိုင်ငံပေါင်းစုံတွင် သိမ်ငယ် နေရသည်၊၊ မြန်မာပါ့စပို့ စ် ကိုင်ပြီး နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ကြည့် လျှင် ဗီဇာစလျှောက်သည့်အချိန်မှစပြီး လက်တွေ့ သ်ိပေလိမ့်မည်၊၊
လိုရင်းကိုပြောရလျှင် စွမ်းအားရှင်/ကြံဖွံ့လူအမျိုးအစား များသည် အပြစ်မဲ့ပြည်သူကို သတ်ရဲသည်၊၊ သံဃာကိုရိုက်ရဲ ၊ သတ်ရဲ သည်၊၊( ကျွန်မမျက်စိရှေ့ တွင် ကြုံတွေ့ ခြင်းဖြစ်သည်၊၊) ထိုသူတို့ သည် နေ့ စား 3000 ကျပ်ရသည်ဆိုပါစို့ ၊၊ တလကို 90000 ခန့် ရပေမည်၊၊ သို့ သော် ထိုပိုက်ဆံ သည် မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေ ပြီး ရရှိထားသည့်ငွေကြေး ဖြစ်သနည်း ဆိုသည်မှာ အမေးရှိလာသည်၊၊ မိမိ ဆန်ဒဖြင့်မိမိဘာသာ အဓမ်မ အုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး လူသတ် သောအဖွဲ့ အစည်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ် သည်မှာလည်း မိမိဘာသာဖြစ်သည်၊၊ ထိုသူတို့ ကို နားလည်ရန်မှာ သာမန်လူတစ်ယောက်အဖို့ အင်မတန် မလွယ်ကူသော အရာသာဖြစ်ပေသည်၊၊ လူပီသသော လူဟူသည်မှာ ခံယူချက်ရှိရမည်၊၊ ကျွန်မသည် သာမန်ပြည်သူ တစ်ယောက်သာဖြစ်ပေသည်၊၊ မသေမီ စပ်ကြား အေးချမ်းစွာ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အသက်ရှင် လိုသည်၊၊ စစ်အာဏာရှင်တို့ ဧ၊၊် ၀ါဒဖြန့် ချီရေး အတိုင်း တည်ငြိမ် ၊အေးချမ်းမှု့ ကို သာလိုလားပါသည်၊၊သို့သော် ငြိမ်းချမ်းမှု့ ကို ဖျက်ဆီးနေသည်မှာ အမှန်တကယ် မည်သူဖြစ်သနည်း၊၊ ကျွန်မသည် စစ်အစိုးရဧ၊၊် နှိပ်စက်မှု့ ကို တိုက်ရိုက် မခံရသေးလင့်ကစား၊ မြောက်များလှစွာသော လူအများအပြားသည် စစ်အစိုးရဧ၊၊် ရမ်းကား၊ ယုတ်မာ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းတို့ ကို အကြိမ်ကြိမ် တိုက်ရိုက်ခံစားနေကြရသည်၊၊ မိမိချစ်ခင်တွယ်တာသော သူအချို့ သည် စစ်အစိုးရဧ၊၊် အနိုင်ထက်အလူ ပြုမှု့ ကို ခံစားပြီး သေဆုံးသွား ခဲ့သည်၊၊ သို့ မဟုတ် ယခုတိုင် တနည်းနည်းဖြင့် မရေမတွက် နိုင်သောနေ့ များစွာတို့ တွင် ခံစား နေရ ဆဲဖြစ်သည် ဆိုပါစို့ ၊၊ ထိုသူတို့ ဧ၊၊် နာကျင်ခံစား ရမှု့ ကို အဘယ်ကဲ့သို့ သောအရာဖြင့် ပြန်လည် နှစ်သိမ့်၊ ဖြေဖျောက်ပေးပါမည်နည်း၊၊ ဥပမာ.. ဗုံးခွဲသည့်သူမှာ စစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင် သာ ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ ၊ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ယုတ်မာ၊ ရက်စက်၊ ကောက်ကျစ်သော အစိုးရ ဟုသိရှိထားသောကြောင့် ထို့ အတွက် ထူးပြီးမအံ့သြမိပါ၊၊ ယုတ်မာပြီးရင်း ယုတ်မာသည်ဟုသာ မတွန်းလှန် နိုင်မခြင်း မှတ်ယူရန်ရှိသည်၊၊ သို့ သော် ကျွန်မဧ၊၊်အမြင်တွင် ကျွန်မအထက်တွင် ဖေါ်ပြထား သကဲ့သို့စစ်အစိုးကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် နာကျင်ခံစား ခဲ့ရသူ တစ် ယောက် က လက်တုံ့ ပြန်သည်ဆိုလျှင် ကျွန်မ သည် အကြမ်းဖက်မှု့ ကို လက်မခံ၊ ဆန့် ကျင်သည့်သူ တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သော်လည်း ထိုသူတို့ ဧ၊၊် မတရားပြုခံရမှု့ နှင့် နာကျင်မှု့ တို့ ကို အလိုလို စာနာ၊ နားလည်ခံစားပေးမိပေလိမ့်မည်၊၊ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက် အနေဖြင့် မည်သူမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသေခံ၊ အဖမ်းခံရပါကလည်း မသေမရှင် အနှိပ် စက် ခံရမည် ကို ရင်ဆိုင်ကြရမည်ဖြစ်သော ကြောင့် အပျော် သဘောအနေဖြင့် ခံစားချက်မ၇ှိဘဲ မည်သူမှ လုပ်လိမ့် မည်မဟုတ်ဟု ယူဆမိ ပါသည်၊၊ အင်မတန်လည်း ရင်နင့်စရာကောင်းပါသည်၊၊ ဖက်ဆစ်/နာစီ / စနစ် ကိုတိုက်တဲ့အခါ တွင် တစ်ခုတည်းသော ငြိမ်းချမ်း သောနည်းဖြင့်သာ တွန်းလှန်ရင်း အောင်မြင် ခဲ့သည်ဟု ကျွန်မ မထင်မိပါ၊၊ အခွင့်အခါ ပေးလျှင်ပေးသကဲ့သို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်၊၊ ထိုစနစ်ကို ရရာနည်းမျိုးစုံဖြင့် တွန်းလှန်ရင်း ပြည်သူ တွေ ကျဆုံးသွားရသည့် အခါ ထိုတွန်းလှန်သူများကို အကြမ်းဖက်သမား များလို့ ကျွန်မ ကတော့ထင်မိမည် မဟုတ်ပါ၊၊ ထိုအပြစ်မဲ့ ကျဆုံးခဲ့ရသူများ အတွက် ကြေကွဲစွာ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် အရေးတော်ပုံအတွင်း အသက်ပေးခဲ့သူများအဖြစ် စာရင်းသွင်း ဂုဏ်ယူမိရုံ သာပင်ရှိပါသည်၊၊
အကြိမ်ကြိမ် မတရား ရမ်းကား ယုတ်မာ ကောက်ကျစ်သော စစ်အစိုးရနှင့် သူဧ၊၊် အပေါင်းပါ လူတစ်စု တို့ ကို ၀မ်းရေးကြောင့် ရမ်းကားမှု့ ကို ပြုရပါသည်ဆိုပြီး နားလည်ပေးနိုင်ကြလျှင် အကြိမ် ပေါင်း များစွာ မတရားခံစားခဲ့ရသည့်အတွက် နောက်ဆုံး မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး ပြန်လည် လက်တုံ့ ပြန်သည့် သူများကိုလည်း ( အမှန်တကယ်တုံ့ ပြန်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် ) ထိုသူတို့ ကိုယ်စား လက်မခံနိုင် သည့်တိုင် ခံစားနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးမှသာ တရား မျှတ ပေတော့မည် ဟု ထင်မြင်မိပါသည်၊၊၊ ကျွန်မသည် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ရှေ့ မှ ရဲရဲဝံ၀ံ မပါဝင်ရဲ သေး သောကြောင့် စွမ်းစွမ်းတမံ ကုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ လုပ်ဆောင်နေသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်မိသည်၊၊ အလွန်အမင်း ဂုဏ်ယူမိသည်၊၊ ထိုကဲ့သို့ သော သူများကဲ့သို့ မလုပ်ဆောင် နိုင်သေး သော်လည်း၊ ထိုသူတို့ ဧ၊၊်ကျေးဇူးကို စောင့်သိသည့်အနေဖြင့် အာဏာရှင်များ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ဓါးရိုးကန်း၊ ဒေါက်တိုင် အဖြစ်သို့ ကျရောက်ခံမည် မဟုတ်ပါ၊၊ မည်သည့် အာဏာရှင် မဆို ဒေါက်တိုင်မ၇ှိရင် ကြာရှည်မခံနိုင်ပါ၊၊ ထို့ ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ သော အာဏာရှင် ရပ်တည်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနေသော ဒေါက်တိုင်သမားများကိုလည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊၊
ကိုပေါရဲ့ အာဏာရှင်ကဲ့သို့ ပြုမူတတ်တဲ့သူတွေ အာဏာရလာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ အတူ စေတနာ အပြည့်နဲ ရေးသားထားတဲ့ စာတွေအတွက်လဲ လေးစားမိပါတယ်၊၊ အာဏာရှင်ကို မလိုလားသော ကြောင့်တွန်းလှန်ရင်း အောင်နိုင်ခဲ့ ပြီး ဒီမိုကရေစီ ရရှိလာသည့်အခါတွင် အဘယ်ပြည်သူမှ အာဏာရှင် လက်သစ်ကို ခေါင်းဆောင်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊၊ ပြည်သူလူထုကို လုံခြုံမှု့ ပေးနိုင်သော၊ တရားသော ဥပဒေအောက်တွင် ကျင်းပသော မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူကရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင်သည်သာ အာဏာရရှိလာပါစေဟု ဆန်ဒပြုပါသည်၊၊
ko paw n friends
U all shouldn't debate seriously on this issue unless who is culprit, now I feel that u r accusing that pro-demo group isaculprit. Pls dn't do that.
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာနဲ့ ကိုပေါ နားလည်တာဟာ အနည်းငယ် လွဲနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အရင်ပို့တွေမှာ ကွန်မန့်ပေးခဲ့သလိုပါပဲ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု (သို့) စစ်အာဏာရှင် ၀ါဒ ဖြန့်ချိသော အကြမ်းဖက်မှုတိုင်းကို ရှုတ်ချမှာ မဟုတ်ပဲ ထောက်ခံသင့်ရင် ထောက်ခံမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် လတ်တလော ဗုံးကွဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားပေးတယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။)
စစ်အာဏာရှင်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ လူတိုင်း အယူအဆ အနည်းအများ လွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကို သေချာလေ့လာ၊ ခိုင်မာ စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်နေသူ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ နောက်လိုက်ကောင်းတွေ ရှိသလို၊ ဒီမိုကရေစီနည်းစစ်စစ်နှင့်မှ ရရှိမည်ဟု မယုံကြည်၍သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသော ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်ချက်များကြောင့်သော် လည်းကောင်း အစရှိသော အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် တန်ပြန် တိုက်ခိုက်မှု (သို့) တော်လှန်မှုတို့ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ခံစားနားလည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သူ၊ တော်လှန်သူတိုင်းကို အာဏာရှင် (သို့) အာဏာရှင်ထက် ဆိုးနိုင်မယ့်သူလို့ သတ်မှတ်တာကို လက်မခံနိုင်ခြင်းပါ။
ကိုပေါဆိုခဲ့သလို ... " ဒီလူတွေ အာဏာရလာတဲ့တချိန်မှာ အထက်က အာဏာရှင်တွေ နည်းတူ အကျင့်ပျက်လာခဲ့ရင် လက်ယဉ်နေတဲ့သူတွေပီပီ အမြင်မတူသူတွေကို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ဖို့ကို သူတို့ လက်ရွံ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အခု အာဏာမရှိခင်မှာတောင် လက်မရွံ့သမားဘဝကို ခံယူနေချင်နေကြတယ် မဟုတ်ပါလား။" ... ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါ။
ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုပါပဲ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သူတွေဟာ ... " ဒီမိုကရေစီအရ နည်းလမ်းကျချင်မှ ကျမယ်၊ ဥပဒေအရ လွှဲချော်ရင် လွှဲချော်မယ်။" ... အလိုလို သွေးဆာနေသူတွေ မဟုတ်သလို၊ ရက်စက်ယုတ်မာနေသူတွေလည်း မဟုတ်ပါ။ (အဲဒီလို တော်လှန်သူတွေထဲမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့် ဘ၀တွေ အဖတ်ဆယ်မရအောင် အကြိမ်ကြိမ် ကြွေမွ ပျက်စီးခဲ့ရသူတွေလည်း ပါမှာပါ။)
ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက် (သို့) အကြောင်း အမျိုးမျိုးသော ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တော်လှန်မှုပုံစံကို တရားဥပဒေတို့၊ ဒီမိုကရေစီစံတို့နဲ့ အမြဲတိုင်းတာပြီး ရက်ရက်စက်စက် အပြစ်မတင်စေချင်တာပါ။
ဥပမာ ... အခု အချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်(တွေ)ကို သတ်တဲ့သူဟာ တရားဥပဒေအရ သေဒဏ်ထိကျနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲ့ဒီသတ်တဲ့သူကို အပြစ်မြင်မှာ
မဟုတ်သလို ဘယ်တော့မှ ရှုတ်ချမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
မှန်ပါတယ်။ ဗုံးလက်သည်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ တပ်အပ်မပြောနိုင်တဲ့အနေအထားပါ။ နအဖ လက်ချက်လည်း အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း အဲသည်လိုပဲ ယူဆချင်ပါတယ်။ ဟိုးယခင် ရှေးပဝေသဏီက ပေါက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗုံးများအတွက် နအဖလက်ချက်လို့ပဲ တောက်လျှောက် ယုံကြည်လာခဲ့သူပါ။
သို့သော် ကနေ့ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဝိုင်းဝန်းရှုံ့ချကြရမယ့်အစား ဤဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကို ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော ဗုံးများသဖွယ် ဝမ်းသာအားရ ထောက်ခံရေးသားပြနေသော အတိုက်အခံ ဘလော့ဂ်အချို့နှင့် အတိုက်အခံအမြင်တချို့ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီပို့စ်များကို ရေးသားနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အတိုက်အခံတွေအချို့ အနေနဲ့ သူတို့ဖောက်တာမဟုတ်ခဲ့ရင် (နအဖ လက်ချက် ဖြစ်နိုင်ဖို့အခြေအနေ များတဲ့ အနေအထားမှာ) “သူများ မစင်ပုံ ကားယားခွ” ဆိုသလို ဘာကြောင့် အချောင်ကြားကနေ ဝင်ရောက်၍ အားရဟစ်ကြွေးပြနေရပါသလဲဆိုတာ ကျနော် စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဒါဆိုရင် သူတို့ဆန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နအဖ လုပ်ရပ်ကိုပဲ နောက်ကနေ တနည်းတဖုံ ထောက်ခံပြသလို ဖြစ်မသွားဘူးလား။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတခုက ဒီလုပ်ရပ်မှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ကြားက အချောင်ပါသွားလို့သာ သူတို့လုပ်တယ်လို့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တာဝန်မခံရဲကြပုံ ရတယ်။ သူတို့ဆိုရင်လည်း ဒါမျိုး လုပ်မိမှာပဲလို့ ပေါ်တင်ဝန်ခံပြောကြားနေကြတဲ့ ပြည်ပရောက်အတိုက်အခံ အမြင်တွေ၊ အင်တာဗျူးတွေကို နားထောင်ရတဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးတွေကို ရေးနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါဗျိုး။
(လွန်လွန်း)....အရင်ပို့တွေမှာ ကွန်မန့်ပေးခဲ့သလိုပါပဲ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု (သို့) စစ်အာဏာရှင် ၀ါဒ ဖြန့်ချိသော အကြမ်းဖက်မှုတိုင်းကို ရှုတ်ချမှာ မဟုတ်ပဲ ထောက်ခံသင့်ရင် ထောက်ခံမယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် လတ်တလော ဗုံးကွဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားပေးတယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။)
(ကိုပေါ) ....ကျနော့်ပို့စ်တွေကလည်း လတ်တလော ဗုံးကွဲမှုတွေနဲ့ နောက်ကွယ်ကသဘောထားတွေကို ရှုံ့ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လွန်လွန်းအနေနဲ့ လတ်တလော ဗုံးကွဲမှုတွေကို အားမပေးဘူးဆိုရင် ယခု ပို့စ်တွေမှာ ကျနော့်သဘောထားအတိုင်းပဲ ရှိမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
(လွန်လွန်း)...... စစ်အာဏာရှင်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ လူတိုင်း အယူအဆ အနည်းအများ လွဲနိုင်ပါတယ်။
(ကိုပေါ) .....တော်လှန်သူတိုင်းကို အာဏာရှင် (သို့) အာဏာရှင်ထက် ဆိုးနိုင်မယ့်သူဟု မပြောခဲ့ပါ။ အကြမ်းဖက်နည်း (Terrorism)ကို သုံး၍ တိုက်ခိုက်သူများကိုသာ ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလုပ်ရပ်များကို လွန်လွန်းကိုယ်တိုင် မထောက်ခံဘူးလို့ အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရပ်ကို မထောက်ခံဘူးလျှင် သူတို့ကို ကာကွယ်နေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
(လွန်လွန်း)....ကိုပေါဆိုခဲ့သလို ... " ဒီလူတွေ အာဏာရလာတဲ့တချိန်မှာ အထက်က အာဏာရှင်တွေ နည်းတူ အကျင့်ပျက်လာခဲ့ရင် လက်ယဉ်နေတဲ့သူတွေပီပီ အမြင်မတူသူတွေကို အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ဖို့ကို သူတို့ လက်ရွံ့မှာမဟုတ်ဘူး။ အခု အာဏာမရှိခင်မှာတောင် လက်မရွံ့သမားဘဝကို ခံယူနေချင်နေကြတယ် မဟုတ်ပါလား။" ... ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလည်း လက်မခံနိုင်ပါ။
(ကိုပေါ)...... သာမန်ပြည်သူတွေ သေဆုံးရတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံနေကြသူတွေဟာ သွေးဆာသူတွေမဟုတ်ရင် ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပါလဲ။ လွန်လွန်းကိုယ်တိုင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေကို မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာ။ ဒါဆို ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ အတိုက်အခံဖက်က စနက်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လွန်လွန်းအနေနဲ့ ဒီလူတွေရဲ့ အလားတူလုပ်ရပ်တွေကို ထောက်ခံရေးသားနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။
(လွန်လွန်း).....ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက် (သို့) အကြောင်း အမျိုးမျိုးသော ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တော်လှန်မှုပုံစံကို တရားဥပဒေတို့၊ ဒီမိုကရေစီစံတို့နဲ့ အမြဲတိုင်းတာပြီး ရက်ရက်စက်စက် အပြစ်မတင်စေချင်တာပါ။
(ကိုပေါ).... တော်လှန်မှုပုံစံဆိုတာမှာ အကြမ်းဖက်မှု မပါပါ။ တရားဥပဒေဆိုတာထက် တရားမျှတမှု ပေတံဆိုရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ မျက်စိတလုံးအတွက် မျက်စိတလုံး၊ အသက်တချောင်းအတွက် အသက်တချောင်း အဲဒီလို စည်းမရှိကမ်းမရှိ လက်တုန့်ပြန်တတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကို အလိုမရှိပါ။ ဒါဟာ မယဉ်ကျေးတဲ့ အရိုင်းခေတ်က ဥပဒေသ ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလို အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေ၊ သာမန်ပြည်သူတွေကို “မကောင်းသူထိပ်၊ ကောင်းသူထိပ်” ဆိုပြီး စွတ်ရွတ်ဗုံးခွဲတဲ့လုပ်ရပ်က ပိုဆိုးပါသေးတယ်။ လုပ်သူကတခြား၊ ခံရသူက တခြား။ လွန်လွန်းတို့ပြောသလို မိသားစုနစ်နာရလို့ လက်တုန့်ပြန်ကြေးဆိုရင် အဲဒီ ဗုံးခွဲမှုမှာ ပါသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ မိသားစုတွေက ဗုံးခွဲသူတွေရဲ့ မိသားစုတွေကို ပြန်ပြီး ဗုံးခွဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အကြမ်းဖက်သံသရာစက်ဝန်းက မရပ်တော့ဘူးပေါ့။
(လွန်လွန်း) .... ဥပမာ ... အခု အချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်(တွေ)ကို သတ်တဲ့သူဟာ တရားဥပဒေအရ သေဒဏ်ထိကျနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲ့ဒီသတ်တဲ့သူကို အပြစ်မြင်မှာ
(ကိုပေါ) .... အခုပြောတဲ့နေရာမှာ စစ်အာဏာရှင်(တွေ)နဲ့ သိမ်းကြုံးပြောနေတာတွေ့ရပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ အဲဒီအထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲ။ တိတိကျကျ ပြောပါ။ သင်္ကြန်ဗုံးမှာ သေဆုံးသွားရသူတွေ အားလုံးဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေလား။ လွိုက်ကော်ရဲစခန်းမှာ သေဆုံးသွားရတဲ့ ရဲတပ်သားတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေလား။ ဒေါက်တိုင်ဆိုတဲ့လူအမျိုးအစားတွေမှာရော ဘယ်သူတွေပါသလဲ။ ကြံ့ဖွံ့ထဲရောက်နေကြသူအားလုံးဟာ ဒေါက်တိုင်တွေလား။ အဲဒီလူတွေထဲက လူတိုင်းဟာ အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲသတ်သင့်လောက်တဲ့ အပြစ်တစုံတရာ ကျူးလွန်ထားမိလို့ပါလား။
လွန်လွန်တို့ တည်ဆောက်ချင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်လို လူ့အဖွဲ့အစည်းလဲ ကျနော်နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ။ စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်၊ တရားမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ကို မထောက်ခံနိုင်လို့ တော်လှန်နေတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်သားတွေက ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်၊ တရားမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်(အဓမ္မ လုပ်ရပ်)တွေကို ကျူးလွန်ရင်တော့ မျက်စိမှိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သလို၊ တရားမျှတမှုဟာလည်း လူတိုင်းအတွက်ပါဘဲ။
ကိုပေါ ဆိုလိုရင်းကို ကျွန်တော် အပြည့်အ၀ နားလည်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် (တွေ) ဆိုတာ အထက်ပိုင်းကနေ ရက်စက်ယုတ်မာစွာ စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ အာဏာရှုးတစ်စုကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒေါက်တိုင်တွေ ဆိုရာမှာလည်း အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို မိုးခါးရေကို စိတ်တိုင်းကျ သောက်သုံးသူတွေကို ဆိုလိုတာပါ။
စစ်မှန်တဲ့ တရားမျှတမှုကို လူတိုင်း လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ဖို့တော့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေကို တော်တော်ကြီးကို စတေးရဦးမှာပါ။
UN မှာ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးရင်တောင် China & Russia တို့ကြောင့် အမြဲ ပျက်ခဲ့ရသေးတာ။ ဒါကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ပေါ်တင်ကြီး မတရားမှုပါ။ ဒါကြောင့် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းကိစ္စပျောက်ကင်းပြီး စစ်မှန်တဲ့ တရားမျှတမှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူဘောင်လောကကို ရရှိဖို့ဆိုတာ တော့်တော့်ကို ကြိုးစားရဦးမှာပါ။
ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးရင် ပြီးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေး ဖလှယ်ကြတာပေါ့။)
ကိုပေါတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ အနည်းငယ် ကွာခြားတာကလွဲရင် (တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ နားလည်မှုပေးခြင်း အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှု) ကျန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်က အတူတူပါပဲ။